AMISOM oo madaafiic ku garaacday degmada Jannaale – STAR FM SOMALIA
AMISOM oo madaafiic ku garaacday degmada Jannaale
Ciidamada AMISOM ayaa madaafiic ku garaacay deegaanka Jannaale ee Gobolka Shabeellaha Hoose, halkaasoo ay ku sugan yihiin dagaalyahanada Al-Shabaab.
Sida ay sheegayaan wararka madaafiicdan ayaa la sheegayaa inay geysatay khasaare, balse ma aanan helin tirada dadka wax ku noqday.
Dadka ku nool Jannaale ayaa sheegay in xalay u aheyd habeen wal wal iyo cabsi u aheyd, kaddib markii ay maqleen jugta madaafiic ku soo dhaceysay agagaarka deegaanka.
AMISOM iyo Al-Sabaab ayaa midna ka hadlin duqeynta Jannaale, waxaana warar aan la xaqiijin in madaafiicda ay aheyd mid jawaab ah oo ka dambeysay saldhig ay leeyihiin AMISOM oo la duqeeyay.
Ciidamada AMISOM ayaa bishii September ee sanadkii 2015 isaga baxay deegaanka Jannaale, kaddib weerar culus oo Al-Shabaab ku qaaday saldhig ay degenaayeen.
Axmed Madoobe oo gaaray Isutaga Imaaraadka Carabta (SAWIRRO)
Khasaaro badan oo ka dhashay dagaalkii ugu dambeeyay ee Gaalkacyo ka dhacay